Sidee loo doortaa miiska shaaha casriga qolka fadhiga?
Xayawaanka la oggol yahay
Beauty iyo caafimaad
Bangiga Piggy ee cuntada cuntada
Ilmaha iyo daryeelka isaga
Miisaanka waa lagaa qaadayaa xeerarka
Cilmi-nafsiga iyo Xiriirka
Qodobbada iyo Qulqulka
Australia iyo Oceania
Guriga Naqshada gudaha
Miiska kafeega qolka fadhiga - alaabta guriga ee madadaalada ee guriga casriga ah
Qof kastaa wuxuu ku riyoodaa inuu gurigiisa ku qalabeeyo geeska aad ku kalsoon tahay. Maqaayad qaxwaha qurxinta ah ee qolka fadhiga ayaa noqon karta xarunta madadaalada. Waxay u adeegtaa sida qurxiyo, oo u taagan jilayaasha kala duwan, waxay gacan ka geystaan ​​in ay abaabulaan casho khafiif ah jawi saaxiibtinimo, waxay yeelan kartaa naqshad xiiso leh.
Miisaska quraacda qurxinta ee qolka fadhiga
Gudaha gudaha casriga ah, noocan oo kale ah wuxuu qabtaa culeys farsamo iyo jimicsi. Qolka fadhiga qolka fadhiga miiska qaxwaha wuxuu u muuqdaa mid dhamaystiran. Qalabka alaabta guriga leh wuxuu ka dhigaa mid raaxo leh oo raaxo leh, waxaad ku rakibi kartaa weelka ubaxa ama koob oo qaxwo ah, geli wargeys, oo ka fog TV-ga. Naqshaduhu waxay bixiyaan taageerooyin qaab kasta oo ka samaysan waxyaabo kala duwan. Waxay ku kala duwan yihiin xuduudaha isdhaafka ah iyo dherer yar, markaad dooranayso waa muhiim inaad tixgeliso qaabka qolka fadhiga, kaas oo loo xirxiray qaybta.
Ku qor jadwalada caadiga ah ee qolka fadhiga
Taageerayaasha mabaadii'da dhaqameed waxaa soo wajihi doona alaabta guriga oo laga sameeyey alwaax. Naqshadeynta waxay isticmaashaa lugaha lafdhabarta ama walxaha lagu qurxiyo. Nooca caadiga ah ee qoryaha alwaaxda ah waxaa lagu sameeyaa qaab qaansar ah oo leh afar qaab oo toosan ama midab-kala-soocid ah, wuxuu leeyahay hal miiska, marmarka qaarkood waxaa ka mid ah roog. Qaybta alwaaxda ee alaabta guriga waxay u ekaataa mid ixtiraam leh, ku habboon fududeynta ama ugu badan ee la safeeyey.
Badanaa, alaabooyinka caadiga ah ee alaabta guriga waxaa lagu qurxiyaa dhar, dhagxaan dhagax ama bir ah. Qoryaha waxaa lagu dabooli karaa wax, cuncun, da ', oo lagu qurxiyo sawirada iyadoo la isticmaalayo casaan. Jadwalka kookada asaasiga ah ee qolka fadhiga waa qaab xaddidan. Waxaad arki kartaa moodooyin u eg sida shamfirashka, caleen khafiif ah ama dhibic biyo ah, kala duwanaansho ama kala duwanaansho. Waxay ku farxaan isha marka ay ku jiraan qolkaas.
Miisaska kariska casriga ah ee qolka fadhiga
Tilmaamahan alaabta guriga wuxuu keenaa qalabka cusub ee gudaha. Qalabka casriga ah, xoogsaariddu waxay ku jirtaa minimalism iyo wax soo saarka. Xalaal fudud oo la isku qiyaaso oo ah qaababka lugaha tooska ah iyo jirkana aan lahayn daaq ku haboon qaabka casriga ah ee hoolka. Dhismayaasha sidoo kale waa kuwa ugu diyaargaroobidda - foomamka isdabajoogay, taageerada asalka ah, xirmooyinka quruxda badan, qalabka kala duwan ayaa loo isticmaalaa wax soo saarkooda.
Miisaska kafeega muraayadaha qolka fadhiga ayaa si fiican u wadaagaan dhamaan walxaha qolka oo ku haboon nooc kasta. Tiknolojiyada sare iyo casriga ah, waxaad ka heli kartaa nooc ka mid ah joomatari diimeed ama asal ah (xitaa jilicsan) iyo lugaha chrome. Wuxuu abuuraa sawir aan miisaan lahayn qolka oo wuxuu gacan ka geysanayaa abuurista iftiin iyo naqshad hawo. Muraayadda waxaa lagu sameeyey hufan, madow, madow, dhalaalaya. Miiska qaxwada ee qolka fadhiga casriga ah, oo lagu sameeyay qaab laba iskudhexaad ah, waa mid ballaaran oo waxtar leh.
Guryaha casriga ah, miis galaas oo ka sameysan hal xaashid xayndaab ah qaab gaar ah waxay u eg tahay mid aan culeys lahayn oo dabiici ah. Meelaha shaqada loo adeegsado ayaa la isugu dari karaa qalabka kale. Waxyaabaha la sameeyey ee muraayadda, ayaa qaabeeyey qaab ka samaysan alwaax, oo lugaha la jarjarey ayaa u muuqda mid fudud oo fudud. Badanaa cowsku wuxuu ka kooban yahay waxyaabo dabiici ah. Saldhigga dabaylaha qufaca ama geesaha deerada, daboolay dhalada, qolka ayaa buuxin doona hal-abuurka iyo shakhsiyadda.
Sida loo doorto miiska kafeega qolka fadhiga?
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay alaab gudaha ah, oo ah xusuus xasaasi ah. Waxay u adeegi kartaa inay noqoto meel lagu cuno madadaalo ama ay doorato doorka yar yar. Iyada oo ku xiran qaabka naqshadeynta hoolka, moodooyinka qaababka kala duwan ayaa loo xushay, laga bilaabo qalabka ku habboon. Miis fadhiga muraayadda ee qolka fadhiga wuxuu u eg yahay mid muuqata, wuxuu qolka ka dhigayaa mid furan. Qaababka waaweyni waxay bedeli karaan alaabta guriga. Caan waa muraayadaha tamarta, xulashooyinka nidaamka kaydka qarsoon, waxa ugu muhiimsan waa in la doorto qaabka la doonayo iyo waxqabadka dhabta ah.
Ku wareeji miisaska kafeega qolka fadhiga
Haddii aad rabto inaad abuurto jawi u gaar ah hoolka, waxaad tijaabin kartaa tusaalooyinka alaabta guriga. Markaad xulato foom, doorbidid ayaa la siiyaa marka loo eego hawlgalka. Moodhalka wareega ayaa u fiican isticmaalka aag weyn oo fadhigiisu yahay - kan kaniisadaha iyo geesaha jilicsan. Waxay ku habboon yihiin qolal yaryar, badbaadin meel, iyo maqnaanshaha geesaha iyo lakulanka tartanka waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhaqso ah ugu wareegto qalabka guriga. Doorasho xiiso leh waa badeecad wareeg ah oo ku taal hal lugta la jarjaray - waxay u egtahay mid xariif ah oo si sahlan ku habboon gudaha gudaha.
Miiska shaaha lagu cabbo ee qolka fadhiga
Baaxadda dhismaha waxaa lagu doortaa iyadoo ku xiran cabbirka qolka. Waxaa muhiim ah in qaabkani aanu ahayn mid aad u ballaaran oo leh aag yar. Miiska shaaha lagu cabbo ee nalka qoyan oo la wada daboolo waa habboon. Waa furan, oo kooban, waxay abuuraysaa aragti guud oo xaalada ah. Waxaa lagu rakibi karaa meel u dhow kursi dheer oo ku hareereysan laba kursi oo armaajo ah. Moodooyinka Oval waxaa lagu soo saaraa afar lugood, waxaa lagu dhejin karaa giraanyo, roogagga hoose iyo qaybta cadaadiska. Waxaa sidoo kale jira noocyo badan oo asalka ah ee socsocodka qaabka taageerada qaabka ugu caansan.
Dhar - Miiska qolka kafeega ee qolka fadhiga
Tani waxay udub dhexaad u tahay gudaha gudaha. Habka xajmiga wuxuu ku habboon yahay qolka aag kasta, si sahlan u habboon aagga jilicsan. Waxaad ku rakibi kartaa meel u dhow kursiga fadhiga ama labo kuraas oo kaliya. Dusha miiska kore waxay leedahay hal taageero dhexe ah ama afar lugood, waxaa lagu dhejin karaa qolof, dhowr dabaq. Isticmaalka sawirada leh muraayad madow, waxay ku habboon tahay qalabka tiknoolajiga sare iyo casriga ah. Minimalism waa badeecado adag oo hooseeya, waxay u egtahay laconic iyo stylish. Nidaamka ugu fiican ee ka hortagga muraayadaha, muunadahani waa mid isdhaafsan iyo mobile.
Soodhadhka iyo miisaska cuntada lagu beddelo ee qolka fadhiga
Qalabka alaabta guriga waxaa lagu buuxiyaa shaqeyn dheeraad ah. Waxaa jira moodooyinka asalka ah ee la adeegsado oo leh adeegyo dheeraad ah. Fursadaha caanka ah ee la gooyo oo si sahlan u rogi kara badeecad guud oo buuxda. Tusaale ahaan, mashiinka mashiinka wareega ee qolka fadhiga wuxuu si fudud u beddelaa xuduudaha iyo xitaa dhererka, laakiin qaabka la isku laaban yahay wuxuu ku jiraa ugu yaraan booska.
Xagga hoose ee miiska sare ee moodada, qaybaha dheeraadka ah waa la qariyaa, taas oo u oggolaaneysa haddii loo baahdo si kor loogu qaado dusha sare. Heerka alaabtu waa la hagaajin karaa iyada oo la adeegsanayo qaab-dhiska, kaas oo kor u qaadaya miisaanka loo maro heerkii la rabay. Natiijo ahaan, ma ahan nooc ka mid ah joornaalka, laakiin miis dhammaystiran, oo ka baxsan martida badan ayaa la heli karaa.
Maqaayad si fiican loo soo doorto qolka fadhiga wuxuu abuuraa jawi gaar ah gudaha gudaha. Wuxuu qabanqaabiyaa booska, wuxuu ku dhameeystaa aagga jilicsan oo leh farsamo. Miiska waxay qurxinaysaa naqshadeynta qaababkeeda, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso qalabka casriga ah meel caan ah. Martida oo dhan waxay ku raaxeysan kartaa koob oo kafeega leh aag raaxo leh oo raaxo leh. Miiska asalka ahi wuxuu noqon doonaa jasiirad farsamo iyo xarun isku xiran oo ku xeeran dhammaan gudaha gudaha saldhigga.
Qalabka albaabka ee MDF
Qaybaha hoose ee hoose ee dhagaxa
Nalalka clambigyada ah ee loogu talagalay qurxinta dibedda ee guriga
Qolka jikada sariirta leh
Sidee loo dhisaa qubeyska dalka?
Qulqulka qoryaha ee xagaaga
Qolka noolaanta ee qaabka dalka - dalka gudahiisa khibrad leh
Fikradaha loogu talagalay jikada, oo si dhakhso ah u beddeli doona gudaha ugu caansan
Noocyada dabaqa ah ee guryaha
Sariirta qoryaha leh gacmo gaar ah
Midab buluug ah gudaha gudaha
Guryaha qaabka farsamada sare leh
Intee jeer ayaad ku dhali kartaa galmada dabada?
Kim Kardashian wuxuu noqon doonaa mulkiilaha ugu horreeya ee adduunka ugu wanaagsan ee abaalmarinta sharafka leh ee ka socda CFDA
Isku dhejinta weelasha marinnada afka ilmagaleenka
Sidee loo qaabeeyaa guri?
Beeridda toonta jiilaalka
La-qabsiga Labaad ee Kansarka
Iris Bearded - Astaamaha Horumarka iyo Daryeelka
Kalluunka lagu shiilay
Sidee loo hagaajiyaa ciladda?
Feng Shui hudheellada
Sidee loo nadiifiyaa musqusha?
Lisa Rinn oo 53 jir ah ayaa gabi ahaanba si qarsoodi ah u qabatay
Laos - caadooyinka iyo caadooyinka
Nemet sababaha iyo lugta bidix
Courtney Cox waxay soo aruurisay asxaabteeda riwaayad samafal ROCK4EB!
Salad leh digirta miiska xafladaha - cuntooyinka macaan iyo fikradaha qurxinta cunnada fudud
Qalabka fadhiya oo yar yar
Sida loo kobcin lahaa likaha shaaha?
© 2021 so.unistica.com